PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-17 - Owebucs udalula izinkinga
Owebucs udalula izinkinga
Uzoziqeda nya ekilabhini yakhe
Ilanga langeSonto - 2017-09-17 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
UMILUTIN “Micho” Sredojevic ongumqeqeshi we-orlando Pirates udalula izinkinga ezihaqe ibhola laseningizimu Afrika athembisa ukuziqeda nya ngokushesha ekilabhini yakhe.
Ibucs ishayane yaze yabukana nemaritzburg United kuba ngu-0-0 kowe-absa Premiership ngolwesihlanu ebusuku eharry Gwala Stadium, emgungundlovu. Imaritzburg iqede lo mdlalo ingasaphelele kukhishwa ngekhadi elibomvu usiphesihle “Mbesuma” Ndlovu ngesiwombe sesibili sesiyophela.
Lo mdlalo bekungabhekiwe ukuthi ungabi nagoli kwazise la makilabhu adume ngokuhlasela, kawapaki ibhasi.
Nokho umdlalo kawuzange ufike ezingeni ebelilindelwe, yize ekwazile ukuvikela irekhodi lawo njengoba engakaze ehlulwe emidlalweni yeligi selokhu iqalile.
Usredojevic obukeka eyihlanganisa ipirates, uveza izinkinga athi yizona ezibamba abadlali bakuleli ukuthi baye e-europe.
“Kulesi sikhathi esengisihlalile kuningi esengikubonile okungekuhle okwenziwa ngabadlali bakuleli.
"Engikuqaphelile wukuthi kabafuni ukuphaselana ibhola ngokushesha bayalibambezela. Ukubambezela ibhola akufuneki ebholeni lamanje kuyasheshwa.
“Kayikho into emqoka njengokunikana ibhola uma niyikilabhu, yiyona into eseyinkinga emakilabhini akuleli. Phambili-ke kuyabhujwa, kabakwazi ukubona indawo eyingozi okufanele bakhahlelele ipali kuyona yingakho amagoli eyindlala.
Kodwa-ke ngizoyilungisa le nto kwezami.
“Ngisemkhankasweni wokubuyi- sa isithunzi sale kilabhu. Kufanele abadlali bazi ukuthi leli bheji abalifakile lineminyaka yobudala engama-80, kukhona abalandeli bethu abafe belithanda. Labunjwa kanzima leli bheji ngezikhathi ezinzima ngakho-ke wonke umuntu kufanele akwazi ukubaluleka kwalo,” kusho usredojevic.
Ufadlu Davids ocija imaritzburg, uthi baziyekele ukunqoba lo mdlalo.
“Ngesiwombe sokuqala bekufanele sishaye amagoli amathathu okungenani kodwa sahlulwa ngamathuba alula.
Kodwa-ke kuningi esikufundile okusafanele sisebenzele kukhona. Ngiyababongela abadlali bami benze konke okusemandleni ukuthi singahlulelwa ekhaya,” kusho udavids.
“Ukubambezela ibhola akufuneki ebholeni lamanje kuyasheshwa...
ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
NGUSIPHESIHLE Ndlovu wemaritzburg United nothabo Rakhale we-orlando Pirates emdlalweni we-absa Premiership ophele ngo-0-0 ngolwesihlanu ebusuku eharry Gwala Stadium.